अपी पावर कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, ३० भदौ २०७३)
अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा रू. ६६ लाख ६७ हजार घाटामा रकेको खुद नाफा गत आवमा सुधारिएर रू. ८ करोड ८ लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको भदौ १८ गते भएको साधारणसभाले ५ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरिसकेको छ ।
मैनबत्ती विश्लेषण : पछिल्लो ५ व्यापार दिनको आकृति हेर्दा शेयरमूल्यबारे लगानीकर्ताहरू अन्योलमा रहेको देखिन्छ । अन्तिम दिनमा पनि कालो लामो टुपी र छोटो पुच्छर भएको मैनबत्ती बनेको छ ।
आरएसआई : न्युट्रल जोन (४९ दशमलव ३८ स्केल)मा छ । खरीद चाप सन्तुलनमा छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १० दशमलव १७ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्यरेखा र सातदिने मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य सातदिने रेखा ट्रेण्ड लाइनभन्दा तल र २१ दिने रेखा ट्रेण्ड लाइनभन्दा माथि रहेको छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ६ सय ५ र महँगिएमा रू. ६ सय ४४ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।
कम्पनीको आव २०७१/७२ र आव २०७२/७३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना :
- कम्पनीको २०७२/७३ आवको अन्तिम त्रैमासमा खुद नाफा सुधारिएर रू. ८ करोड ८ लाख नाफामा पुगेको छ । गत आवबाट कम्पनीले विद्युत् विक्री शुरू गर्नाले र अन्य आय पनि उच्च दरले बढ्नाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
- अघिल्लो आवमा घाटामा रहेको जगेडा कोष सुधारिएपछि रू. ६७ लाख १८ हजार पुगेको छ ।
- लगानी साढे १४ गुणा बढेर रू. १४ करोड ५४ लाख पुगेको छ ।
- कुल आय करीब १ सय १३ गुणा बढेको छ । गत आवमा विद्युत् विक्री शुरू भएकाले र अन्य आय १४ दशमलव ९० प्रतिशत बढ्नाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
- खुद चालू सम्पत्ति शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत बढेर रू. १९ करोड ४९ लाख र खुद चालू दायित्वमा अघिल्लो आवको तुलनामा सुधारिएको छ ।
- प्रशासनिक खर्च १२ दशमलव ९० प्रतिशत बढेर रू. ६६ लाख ५३ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, गत आवमा कम्पनीको रू. २४ लाख ९९ हजार प्रोजेक्ट खर्च भएको छ ।
- कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाटको नौगरगड सानो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको व्यावसायिक सञ्चालन गरिसकेको र माथिल्लो नौगर गड जलविद्युत्को पीपीए पाउने प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले ४० मेगावटको माथिल्लो चमेलिया प्रोजेक्टको निरीक्षण लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
- कम्पनीको चौथो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार पीई रेशियो १ सय ४ गुणा र प्रतिशेयर आम्दानी रू. ८ छ । सो आम्दानी र शेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्यको आधारमा निकालिएको पीई रेशिया गुणा छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको करीब ६ गुणा छ ।